Puntland oo Diidey in dib loogu soo celiyo Tahriibeyaal • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland oo Diidey in dib loogu soo celiyo Tahriibeyaal
Puntland oo Diidey in dib loogu soo celiyo Tahriibeyaal
April 28, 2010 - By: Abdirahman. A
Qunsulka Soomaaliya u fadhiya wadanka Yemen Xuseen Xaaji Axmed oo u waramaayay Horseed Media ayaa sheegay in Dowlada Puntland ay ka hor timi kusoo celinta dad tahriibeyaal ah oo ku sugan dalka Yemen,kuwaasi oo marka ay arkeen xaalada nololeed ee ka jirta halkaasi ay door bideen in ay dib ugu noqdaan goboladii ay ka yimaadeen.
Tahriibeyaashaas ayaa waxaa ay isugu jiraan qaybaha kala duwan ee bulshada, sida caruur, haween iyo ragba kuwaas markoodi hore nolosha ka jirta dalka Soomaaliya ay ka door bideen in ay tegaan dalka Yemen.
Dhegayso Waraysiga aan la yeelanay Qunsuliyada Soomaaliya ee dalka Yemen [powerpress: url=”https://horseedmedia.net/audio/qunsulka_ymene_xuseen.mp3″]
Maamulka waaxda socdaalka Puntland ayaa dadkaasi si rasmi ah u diiday in gudaha Puntland dib loogu soo celiyo, waxaana uu Xuseen Xaaji Axmed xusay in masuuliyinta Dowlada Puntland ay diideen in dib ugu soo noqon karin degaanada Puntland dad martkii hore si sharci daro ah uga tahriibey xeebaha isla markaana aan deegaan ku lahayn Puntland.
Sidoo kale wuxuu sheegay in maamulka Puntland ka dalbaday in go’aanka ay qaadatay ee ah in dadkaasi aan dib loogu soo celin karin gobolada Puntland ay qaadato go’aan ka bedelan,waxaana u xusay in masuuliyinta ugu sareysa Puntland uu ka dalbanaayo in dadkaasi loo ogolaado in ay dib ugu noqdaan goobihi ay ka yimaadeen.
Masuuliyin ka tirsan Maamulka Puntland oo ay Horseed Media la xirrirtay si ay wax uga ogaato waxaa ka jira arimahaan ayaa surtagelin in ay hesho.
Dadka tahriibeyaasha ah ee ku xaniban wadanka Yemen ayaa waxaa ay qayb ka yihin dad tahriibeyaal ah oo gaaraya 9000-qof,kuwaasi saddexdii bilood ee ugu dambeeyey gaaray wadanka Yemen.
”Tahriibeyaashaasi ayaa waxaa doonyaha ay ku tageen wadanka Yemen ay ka raaceen xeebaha Puntland, Jabuuti iyo Eritrea. Maamulka Puntland dhowr jeer ayaanu kala hadalnay wax ka qabashada qulqulka tahriibta. Xitaa Wasiirka arimaha Puntland Cabdulaahi Axmed Jaamac ilkojiir waan kala hadlay xiligii uu soo gaaray wadanka Yemen wax ka qabashada tahriibta kasoo dhoofaysa xeebaha gobolka Bari”,ayuu yiri Xuseen Xaaji Axmed.
Si kastaba ha ahaatrr arimahaan ayaa kusoo beegmayaan xilli Ciidamo ka tirsan Puntland howlgalo dhowaan hawlgal ay sameyeen ay kusoo qab qabteen dad tahriibeyaal ah oo tiradoodu ay kor u dhaafayso 100-qof, waxana maamulku sheegay in ay dib u celinayaan isla markaana fariin u dirayaan dhamaan dadka doonaaya in ay si sharci daro ah uga baxaan xeebaha Puntland, in taasi aysan suurta gal ahayn.